नेपाली कांग्रेसको १५ वर्षे खाका कोर्दै विश्वप्रकाश
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अबको १५ वर्षको ‘कांग्रेस र देशको’ परिकल्पना तयार गर्ने भएका छन्। कांग्रेस सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागले संयोजक शर्मालाई अबको डेढ दशकको कांग्रेसको परिकल्पनाबारे खाका बनाउने जिम्मेवारी दिएको हो।
प्रचार विभागको पुस २१ र २२ गतेको बैठकको निर्णयअनुसार शर्माले कांग्रेसको खाका लेख्न थालेका हुन्। विभागद्वारा जारी विज्ञप्तीमा प्रचार विभागको दोस्रो पूर्ण बैठकका निर्णयहरु मंगलबारदेखि कार्यान्वयन सुरु गरिएको उल्लेख छ।
विभागले पार्टी सत्तामा रहँदा गरेका राम्रा काम, कमजोरी, कांग्रेस नेतृत्वमा भएका आर्थिक उपलब्धी लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल समेत बनाएको छ। कांग्रेसले शासन सम्हालेका समयमा भएका कमी कमजोरी अध्ययन गर्न डा. सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाइएको छ।
त्यस्तै कांग्रेसको नेतृत्वमा भएका राजनीतिक र सामाजिक उपलब्धी अध्ययन गर्न रामचन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ। विभागका सचिव दिनेश थापा मगरद्वारा जारी विज्ञप्तीमा कांग्रेसको नीति र नेतृत्वमा हासिल भएका आर्थिक उपलब्धी अध्ययन गर्न डा. सञ्जय महतोको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइएको छ।
प्रचार विभागले गोपाल कुमार झाको संयोजकत्वमा कम्युनिष्ट सरकारको भनाइ र गराइको अध्ययन कार्यदल समेत बनाएको छ। बैठकले पार्टीका गतिविधिहरुको प्रचार अभियानलाई प्रविधि मैत्री बनाउने, वेवसाइट परिष्कृत गर्ने र फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको दिन पार्टीको मोबाइल एप सार्वजनिक गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।